Maraykanka, 30 November 2017
Khamiis 30 November 2017
Sharci dejiyayaasha Britain ayaa si carro leh uga fal-celiyey dib u faafin uu madaxweyne Trump ku sameeyey Video muslim naceyb ah oo uu barta twitter-ka soo dhigay hogaamiyaha koox midigta fog oo British ah, kaasi oo horey loogu helay hadallo naceyb ku dhisan.
Trump oo tallaabo ka qaadaya Korea-da Waqooyi
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateyn dheeraad ah la saari doono Kuuriyada Waqooyi, kadib markii ay Pyongyang aroornimadi hore ee saakay tijaabisay gantaal ay khubarradu ku tilmaameen inuu gaari karo meel walba oo ka mid ah Mareykanka.
Korea-da Waqooyi oo tijaabisay gantaal gaara Mareykanka
Korea-da Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal qaaradaha isaga gudba markii ugu horeysay tan iyo bishii September, taasi oo dib usoo cusbooneysiisay xiisad, xilli Pyongyang ay sheegtay inay ku dhufan karto meel kasta oo Mareykanka ka mid ah.
Xuska Mowliidka oo Ohio laga Qabtay
Bisha Rabiicul Awal ee tirsiga Islaamka, waxaa sanad walba la qabtaa munaasabad lagu weyneynayo dhalashada Nabi Maxamed NNK, iyada oo meelaha sida weyn munaasabaddan sanadkan looga maamuusay ay ka mid tahay magaalada Columbus ee gobolka Ohio
Mareykanka oo Joojinaya Hubka uu Siiyo YPG
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay dhigiisa Turkiga in Mareykanka uusan sii hubeyn doonin dagaalyahanadda Kurdiyiinta ee Syria.
Arday Lacago U Ururiyay Ambalaasyada Muqdisho
Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadaha ku yaalla gobolka Minnesota ayaa soo gaba gabeeyay olole ay lacago kaalma ah ugu ururuiyeen shaqaalaha ka shaqeeya gaadiidka gargaarka deg dega ah ee ka howlgala magaalada Muqdisho.
Soomaali ku biiri rabay ISIS oo la sii daayey
Abdullahi Yusuf ayaa ka mid ahaa sagaal dhalinyaro Soomaali ah oo ay FBI-du qabatay, iyaga oo doonayey inay ku biiraan ururka Daacish ee dalka Syria.
Tillerson: Khilaaf uma dhaxeeyo Mareykanka iyo Shiinaha
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay “inuusan jirin khilaaf ku saabsan Korea-da Waqooyi” oo u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha, kadib wada-hadallo Bejing ku dhex maray madaxweyne Trump iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping.
Abdi Warsame oo dib loo doortay
Xisbiga Dimoqraadiga oo xalay guulo gaaray
Xisbiga Dimoqraadiga Mareykanka, ayaa guul ka gaaray doorashooyinkii xalay ka dhacay qaar ka mid ah gobollada Mareykanka.
26 qof oo lagu dilay toogasho ka dhacday Texas
Nin ayaa rasaas ku furay dad ku sugnaa kaniisad ku taalla meel ku dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas axaddii, halkaasi oo uu ku dilay 26 qof, islamarkaana 20 kale uu ku dhaawacay.
Mareykanka oo beeniyey inuu dhaqaalaha ka jarayo Soomaaliya
Dowladda Mareykanka ayaa beenisay warar maalmihii u dambeeyay ay baahinayeen qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Soomaalida iyo wargeyso ka soo baxa Kenya oo sheegayay in dowladda Mareykanka ay joojineyso taageeraddii dhaqaale ee ay siin jirtay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.